Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubada cagtu sida ugu wanaagsan loo yaqaan “Greenwood”. Sheekadeena Mason Greenwood ee Caruusadda oo ay weheliso Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskiisa, noloshiisa shaqsiyeed, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee yar ee la yaqaan.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican lugta laba-luglaha ah ee kubbadda casriga. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya Mason Greenwood's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabidda, Mason Will John Greenwood wuxuu ku dhashay maalinta 1st ee Oktoobar 2001 oo ku taal tuulada yar ee Wibsey oo u dhow Bradford, England. Wuxuu ku dhashay hooyadiis Melanie iyo aabihiis Andrew.
Mason Greenwood wuxuu ku dhashay waalidiinta oo wax yar laga ogyahay. Dhibcaha Sawirka: TheSun iyo PXhere.
Muwaadin British ah oo qowmiyado isku dhafan oo xididdada Afrika ah ayaa lagu soo barbaaray meeshii uu ku dhashay oo ku yaal Wibsey oo u dhow Bradford halkaas oo uu kula soo koray walaalkiis ka weyn - Ashton. Ku barbaara Wibsey, Greenwood wuxuu qeyb ka ahaa qoys qiimeeya isboortiga iyo ciyaaraha fudud.
Da 'yar Mason Greenwood ayaa lagu soo barbaaray Wibsey ee Bradford. Dhibcaha Sawirka: TheSun iyo WorldAtlas.
Natiijo ahaan, Greenwood wuxuu ku koray kubbada jecel oo wuxuu ahaa taageere caruurnimo oo Manchester United ah halkaas oo uu ku caabudaa xiddigaha sida Wayne Rooney. Waqtigii xamaasada kubada cagta ay da 'ahaan jirtay 5, wuxuu bilaabay inuu u ciyaaro kooxda maxalliga ah - Westwood Juniors wuxuuna rajeynayay mustaqbal wanaagsan oo kubbada cagta ah.
Da’yarka Greenwood ayaa qabtay Koobkii Yurub ka dib guushii United ay ka gaartay Chelsea kulankii ka dhacay Moscow ee 2008. Astaanta Sawirka: TheSun.
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Intii uu u ciyaarayay Westwood Juniors, Greenwood wuxuu sameeyay qaab ciyaareedyo cajiib ah oo soo jiitay indhaha dadka indha indheeya ee ka soo jeeda Manchester United kuwaas oo fududeeyay ku soo galitaankiisii ​​dugsiga horumarinta kooxda ee Halifax.
Waxay ahayd goobta akadeemiyada in Greenwood bilaabay inuu soo bandhigo dabeecad iyo xirfado ay ka mid tahay inuu goor hore u soo laabto ficil ahaan, isaga oo ku tuuraya darbo xoog leh labada cagood iyo sidoo kale hirgelinta deg deg ah ee khiyaanada kasta oo la tusay.
Horumarka Mason Greenwood ee akadeemiga United wuxuu ahaa mid aad u sarreeya isla markaana xadka ku jira. Astaanta Sawirka: TheSun.
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Mudnaanta Hore
Greenwood si isdaba joog ah ayuu kor ugu kacay darajada kooxda dhalinyarada Manchester, isagoo duubaya tirakoobyo cajiib ah isla markaana ku dhex wareegaya danaha tartan sida ciyaaraha fudud halkaas oo uu galay tartan Under-13 ah kaasoo u arkay inuu jabiyay rikoorkii Great Britain 100 mitir ee kooxdiisa da 'ahaan.
Markii ugu sarreysay waayihiisii ​​hore, qaabkiisii ​​ugu sarreeyay ee Greenwood wuxuu u arkaayey inuu labajibbaar aamin ah u yahay kooxda Man United ee ka hooseysa 18-da xilli ciyaareedkii 2017 – 18. Intii uu la joogay kooxda da 'yarta, wuxuu ku dhammeystay gooldhaliyaha ugu sareeya U18 Premier League North isagoo dhaliyay goolal 17 ah kulamadii 21 waxaana sidoo kale loo magacaabay Player of Tournament markii kooxdiisa ay ku guuleysatay ICGT Trophy ee Netherlands.
Greenwood wuxuu ifafaale u ahaa kooxda U18 ee United inkastoo loo sameeyay inuu ka boodo u ciyaarista kooxda U16. Astaanta Sawirka: DailyExpress.
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Waddada loogu talagalay sheekada
2018 wuxuu ahaa sanadkii uu Greenwood tababarka ka bilaabay kooxda koowaad ee Manchester waxaana boos loo taagay kursiga keydka kulankii United ee finalka Champions League ee Valencia uu markaas hogaaminayay. Jose Mourinho. Ninka da'da ah ee 17 ayaa sii watay safarka kooxdii ugu horreysay ee United safarka ay ku tagayaan ee Mareykanka isla mar ahaantaana sameeyay safkiisii ​​ugu horreeyay ee aan tartan rasmi ahayn isagoo badal u ah Luke Shaw kulankii United ee '1 – 1 barbaro' kulankii Club America.
Markii la caddeeyay inuu yahay mid ka mid ah rajada aadka loo qiimeeyo ee Akaademiga United, Greenwood waxaa loo gacan galiyay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed ee 2nd ee October 2018, si kastaba ha noqotee, weligiis looma adeegsan ciyaar weyn shanta bilood ee soo socota.
Mason Greenwood wuxuu saxiixay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed ee Manchester United markay ahayd 2nd ee Oktoobar 2018. Astaanta Sawirka: Manutd.
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Sare u qaado sheekada
Greenwood ayaa ugu dambeyntii sameeyay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee tartan rasmi ah 6th ee Maarso 2019 isagoo bedel ku soo galay intii lagu jiray kulankii United ee 3 – 1 ay ka qaaday Paris Saint Germain tartanka UEFA Champions League. Markii ugu horreysay, Greenwood - oo da'diisu ahayd 17 sano iyo maalmo 156 - wuxuu noqday ciyaartoygii labaad ee da’da yar oo wakiil uga noqda Manchester United tartamada Yurub iyo waliba kii ugu yaraa ee abid taariikhda Champions League.
Si dhakhso leh ilaa iyo haatan, Greenwood wuxuu cadeeyay muhiimadiisa kooxda koowaad ee Manchester United inuu yahay weerar lagu kalsoonaan karo oo dad badan isbarbardhigayaan halyeeyada sida Robin Van Persie Wayne Rooney iyo Ryan Giggs. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Greenwood wuxuu si aad ah ugu aasaasay kooxda koowaad ee United oo inta badan la barbar dhigo halyeeyadii kooxda. Astaanta Sawirka: DailyMail.
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka nolosha qofka
Mason Greenwood wali waa la guursanayaa waqtiga qorista. Waxaan kuu soo qaadanaa xaqiiqooyin ku saabsan taariikhdiisa shukaansiga iyo heerka xiriirka hadda jira. Ka hadal taariikhda shukaansiga Greenwood, wax yar ayaa laga ogaa nolosha jacaylka ee weeraryahanka ka hor intuusan caan ku noqon caannimada.
Ma ahayn ilaa 8th ee Juun 2019 in Greenwood uu ku dhejiyay sawir saaxiibtiisa aadka u yar ee muuqaal ah barta Instagram. In kasta oo aqoonsiga gabadha aan wali la hubin waqtiga qoraalka, waxaa la rumeysan yahay in Greenwood uu doonayo in xiriirkiisa uu ka dhigo heer hoose. Dhanka kale, labada qof midkoodna ma leeyahay wiilal (gabdho) ama gabadh mid aan guursan waqtiga qoraalka.
Mason Greenwood oo ay la socoto saaxiibtiis aad u yaqaana. Astaanta Sawirka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka Nolosha Qoyska
Mason Greenwood wuxuu ka yimid asalka qoyska dabaqadda dhexe. Waxaan kuu soo qaadanay xaqiiqooyin ku saabsan noloshiisa qoys.
Ku saabsan aabaha Mason Greenwood: Andrew waa aabaha Greenwood. Waa Injineer ka shaqeeya gobolka Yorkshire halka qoyskiisuna degen yihiin Manchester waqtiga qorista. Andrew wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshay nolosha weeraryahanka wuxuuna ku taageeraa kartida aabaha.
Ku saabsan hooyo Mason Greenwood: Melanie waa hooyadeed Greenwood. Waxay gacan ka gaysatay gacan ka gaysashada horumarka si heer sare ah barbaarinta gaar ahaan edbinta isaga inuu is-hoosaysiiyay oo salka ku haya sidii nin muuqata maanta. Melanie wuxuu ku nool yahay meel u dhow Greenwood oo ku taal Manchester taas oo qayb ka ah dadaallada loogu jiro in la siiyo weeraryahanka si loo helo jawi ku habboon oo ku sii wadan kara mustaqbalkiisa.
Mason Greenwood waxaa soo korsaday waalid taageero leh oo wax yar laga ogyahay. Dhibcaha Sawirka: ClipArtStation iyo Manutd.
Ku saabsan walaalnimada Mason Greenwood: Greenwood waxay leedahay walaasheed duug ah oo loo yaqaan Ashton. Iyadu waa lafdhabarta u ordaya garoonka magaalada Washington isla markaana dhigta jaamacadda Manchester Metropolitan University deeqda waxbarasho ee waqtiga qorista. Shaki kuma jiro inay u dhowdahay Greenwood oo iyaduna leh daneyn.
Ku saabsan ehelka Mason Greenwood: Marka laga tago reerka Greenwood, wax yar baa laga ogyahay aabayaashiisii ​​iyo sidoo kale awoowe iyo ayeeyadood. Sidoo kale, ma jiraan wax diiwaangelin ah oo ku saabsan aabaha adeerkiis, abtiyaashiis, abtiyaashiis iyo abtiyaashiis halka ilma-adeerkiis aan lagu aqoonin dhacdooyin caan ah noloshiisa hore ilaa maanta.
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Maxaa ka dhigaya Mason Greenwood sax? Dib u fadhiiso marba markaan kuu soo qaadanayno waxyaabo ku saabsan shaqsigiisa oo kaa caawin doona inaad sawir buuxa ka hesho isaga. Markii hore, Greenwood shaqsiyadaada waa isku darka astaamaha shakhsiyadeed ee Libra zodiac.
Isagu waa kan hooseeya ee dhulka galay, khaladka leh, mas'uul ka ah oo dhif iyo naadir ah muujiya faahfaahinta ku saabsan noloshiisa gaarka ah iyo tan gaar ahaaneed. Marka laga hadlayo danaha Greenwood iyo hiwaayadaha, wuxuu jecel yahay dhageysiga muusikada, shaandheynta, sawir qaadista, daawashada filimada iyo waqti uu la qaato asxaabtiisa iyo qoyskiisa.
Greenwood waxay u qaadataa sawir-qaadasho sidii camal waqti-dhaaf ah. Astaanta Sawirka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Qiimaynta Mason Greenwoods ee saafiga ah ayaa wali dib loo eegayaa waqtiga qoraalka. Si kastaba ha noqotee, wuxuu leeyahay qiime suuq ah oo ah "7,00 Million". Asal ahaanta uu u leeyahay sharafta yar ee uu caan ku yahay ayaa ku jirta mushaarka uu ka helo dadaallada kubada cagta halka falanqaynta qaab nololeedkiisa ay muujineyso inuu ku nool yahay nolol muxaafid ah.
Waxaa mudan in la xuso in Greenwood uusan ahayn qof dakhli ku soo gala waqtiga qoraalka, sidaa daraadeed diirada la saarayo qaabkii uu weeraryahanku ugu ciyaaray garoonka ciyaarta halkii uu lahaan lahaa hantidiisa sida guryaha iyo gawaarida.
Wax badan lagama yaqaan qaab nololeedka Greenwood ee ka baxsan kubada cagta waqtiga qorista. Astaanta Sawirka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Si loo soo duubo sheekadeena carruurnimada Mason Greenwood iyo taariikh nololeedkeena waxaan u soo bandhignaa xaqiiqooyin aan hore loo aqoon ama aad u yar oo aan si adag loogu darin taariikhdiisa.
Mason Greenwood wuxuu ku dhashay kuna koray isagoo Masiixi ah. Waxaa intaa sii dheer, wuxuu leeyahay magacyo Christian ah laakiin uma uusan soo bixin inuu ka hadlo arrimaha ku saabsan diinta.
Waa nin caalami ah oo reer England ah wuxuuna matalayay xulka qaranka England ee ka hooseeya 17 kooxdu ku jirto isagoo ka mid ahaa xulkii ka ciyaaray tartankii Algarve ee Portugal.
Mason Greenwood oo ku saabsan waajibaadka caalamiga ah ee xulka England U17. Astaanta Sawirka: HITC.
Weeraryahan ma leh tattoos mana lagu arag wax cabitaan ah markii la qorayay. Midkoodna looma ogola inuu sigaar cabbo.
Astaamaha ugu weyn ee Greenwoods laba lugood waa awooddiisa uu ku jaro cagaha khaldan.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Taariikhda Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Leighton Baines Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
Paul Scholes Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Kyle Walker Hooyo Sheeko Xogta Xogta Aan Laheyn